उच्च रक्तचापको औषधी कसरी छोड्न... :: डा. अनिल भट्टराई :: Setopati
उच्च रक्तचापको औषधी कसरी छोड्न सकिन्छ?
डा. अनिल भट्टराई वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ)
व्यस्त र तनावपूर्ण दैनिकीले उच्च रक्तचापको समस्या बढ्दै गएको छ। उच्च रक्तचापको समस्या बढेपछि जीवनभर औषधी खानुपर्छ भन्ने मानसिकता छ। तर, आफ्नो आनीबानी र दैनिकीमा केही परिवर्तन गर्ने हो भने चिकित्सकको निगरानमीमा उच्च रक्तचापको औषधी छोड्न सकिन्छ।
चिकित्सका अनुसार शरिरमा हुने सामान्यभन्दा बढी रक्तचापलाई उच्च रक्तचाप मानिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार माथिको प्रेसर (सिस्टोलिक) १४० भन्दा बढी र तलको प्रेसर (डायस्टोलिक) ९० भन्दा बढी भएमा त्यसलाई उच्च रक्तचाप मानिन्छ।
डायस्टोलिक ६० देखि ९० सम्म र सिस्टोलिक ११० देखि १४० सम्म छ भने त्यो सामान्य हो। यो मापदण्डभन्दा बढी भएमा उच्च रक्तचाप र थोरै भएमा कम रक्तचाप हो।
उच्च रक्तचाप भएको कसरी थाहा पाउने ?
उच्च रक्तचापका सामान्य लक्षण भनेका टाउको दुख्ने, रिगंटा लाग्ने, कानमा टुङ–टुङ वा अन्य कुनै खालका आवाजहरु आउने, आँखा तिरीमिरी हुने जस्ता हुन्। कसैकसैलाई वाकवाक लाग्ने पनि हुनसक्छ। तर, उच्च रक्तचापको लक्षण सबैलाई देखिन्छ भन्ने हुँदैन। कसैकसैलाई माथिको रक्तचाप १८० र तलको १२० पुग्दा पनि कुनै लक्षण देखिएको हुँदैन। कसैले उच्च रक्तचाप भएको महिनौं र वा वर्षौंसम्म पनि थाहा नपाउन सक्छन्।
कसैगरी जँचाउन जाँदा मात्रै थाहा पाउनेहरु अधिकांश हुन्छन्। त्यही भएर कहिलेकाँही उच्च रक्तचापलाई ‘साइलेन्ट किलर’ पनि भनिन्छ, जसले थाहै नदिइकन मानिसको ज्यान लिन सक्छ।
उच्च रक्तचापमा कहिलेकाँही मस्तिष्कको नसा फुट्ने, प्यारलाइसिस हुने, दाँयाबाँया हर नचल्ने हुन्छ। कतिको त मृगौला नै खराब भइसकेको हुन्छ। यस्तो समस्या भएर अस्पताल गएपछि मात्र रक्तचाप बढेको भन्ने थाहा पाउने उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्।
अंगभंग भइसकेपछि मात्रै उच्च रक्तचापको समस्या थाहा पाउनुभन्दा बेलैमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। केही लक्षण नदेखिएको भएपनि सामान्यतया ३० वर्ष कटेपछि नियमित रक्तचाप जाँच्नुपर्छ। रक्तचाप कुनै पनि बेला बढ्न सक्छ, यसको कुनै नियम छैन। त्यसैले कम्तीमा दुई–तीन महिनामा जचाउने गरेमा बेलैमा पत्ता लाग्ने र उपचार गर्न सकिन्छ।
उच्च रक्तचापले के कारणले हुन्छ ?
उच्च रक्तचाप बंशाणुगत हो। आफ्ना बा, आमा, हजुरबुवा, हजुरआमालगायत परिवारका सदस्यलाई उच्च रक्तचाप छ भने त्यसको असर छोराछोरी–नातिनातिनीसम्म देखिन सक्छ।
अर्को प्रमुख कारण मोटोपना हो। मोटो व्यक्तिलाई उच्च रक्तचाप हुने संभावना बढी हुन्छ।
धुमपान तथा मद्यपान गर्नेहरुलाई उच्च रक्तचापको जोखिम हुन्छ। धेरै रक्सी र चिल्लो पदार्थ खानेलाई पनि उच्च रक्तचाप हुनसक्छ।
चिन्ता लिने, तनावपूर्ण काम तथा तथा जीवनशैली, अत्याधिक व्यस्त र कम सुत्नेलाई पनि उच्च रक्तचापले सताउँछ।
उच्च रक्तचाप हुनेहरुमा कोलस्ट्रोल पनि उच्च हुन्छ। त्यसले गर्दा उच्च रक्तचाप हुनेको रगतको पनि जाँच गर्नुपर्छ। उच्च रक्तचाप र कोलस्ट्रोल हुनेले औषधी नखाएमा त्यसले मुटु र मृगौलको नलीहरुमा बोसोका मात्रा बढ्दै जाने जस्तासमस्या निम्त्याउँछ। यस्तो बेलामा वेवास्ता गरे हृदयघात हुने, खुट्टाको नली ब्लक भएर खुट्टा काट्नुपर्ने, आँखा कमजोर हँुदै गएर पुरै बिग्रिन सक्ने जस्ता समस्या आउन सक्छन्। उच्च रक्तचापले शरिरको जुनसुकै अंगमा पनि हानी पुर्याउन सक्छ।
रक्तचाप माथि १४० भन्दा बढी र तल ९० भन्दा बढी भएमा जँचाएर मात्रा हेरेर औषधी खानुपर्छ। माथि १४५ देखि १५० र तल ९५ देखि १०० भयो भएमा थोरै मात्रामा औषधी खानुपर्छ, तर एकपटकको जाँचमा नै खानपर्छ भन्ने छैन। एकपटक मात्र जँचाएको भरमा औषधी चलाउन हुँदैन।
एकदमै उच्च रक्तचाप नभईकन औषधी चलाउन हामी सिफारीस गर्दैनौं। जस्तो एकदिन माथि १४५, तल ९५ आयो भने तुरुन्तै औषधी लिनु पर्दैन। यस्ता व्यक्तिलाई एक सातासम्म निगरानीमा राख्नुपर्छ। धेरै जसो समय रक्तचाप बढी भयो भने मात्र औषधी दिनुपर्छ।
प्रेसरको औषधी छोड्न पनि मिल्छ?
यस बिषयमा पछिल्लो समयमा धेरै अनुसन्धान भइरहेका छन्। विभिन्न अमेरिकी संस्था तथा अन्य अस्पतालहरुले गरको अनुसन्धानले कतिपय सामान्य उच्च रक्तचाप भएकाले औषधी खादाखादैं नियन्त्रण भएमा छोड्न सकिने बताएका छन्।
जस्तै कुनै बिरामीले एउटा औषधी ५ एमजी खाइरहेको थियो। एक वर्षदेखि उसको औषधी साढे २ एमजीमा झारियो र एक वर्षसम्म हेर्दा रक्तचाप सामान्य नै छ भने त्यस्तो व्यक्तिले औषधी छोड्न मिल्छ। औषधी छोडेको एक–दुई वर्षको अवधिमा पनि रक्तचाप सामान्य रहेमा औषधी छोड्न सकिन्छ। तर, यसका लागि नुन कम खाने र कोलस्ट्रोल नियन्त्रणमा राख्नु पर्छ।
त्यस्तै नियमित व्यायाम गर्ने र खाने कुरामा ध्यान दिने गर्नुपर्छ। सबै कुरामा ध्यान दिदाँ नियमितरुपमा एक वर्षसम्म पनि प्रेसर सामान्य भए, त्यस्तो व्यक्तिले औषधी छोड्न सक्छ। अथवा खाइरहेको औषधीको मात्रा कम गर्न पनि सकिन्छ। तीनवटा औषधी खाइरहेकोले एउटा मात्रै खानुपर्ने भए त्यो पनि राम्रो हुन्छ।
तर, औषधी छोडेमा पनि चिकित्सकको निगरानी भने भइरहनुपर्छ। एकपटक उच्च रक्तचाप भइसकेको व्यक्तिले औषधी छाडेपनि कम्तिमा हप्ताको एकपटक जाँच भने गराउनुपर्छ।
उच्च रक्तचापबाट जोगिन के गर्ने ?
उच्च रक्तचाप हुन नदिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण घरेलु उपाय भनेको नुन कम प्रयोग गर्नु हो। साविकभन्दा नुन कम खाने हो भने उच्च रक्तचापको समस्या नहुन सक्छ। खानपीन र व्यायाममा ध्यान दिने काम उमेरमा नै सुरु गर्न पर्छ। ५० वर्षको उमेरमा खानपीनमा ध्यान दिउँला, व्यायाम गरौंला भनेर हुँदैन। अगाडि जे जस्तो भए पनि कम्तिमा ३० वर्षको उमेरदेखि नै यसमा ध्यान दिनुपर्छ।
मोटोपन बढ्न नदिने, नुन कम खाने, धुमपान–मद्यपान नगर्ने र कोलस्ट्रोल बढ्न नदिने हो भने उच्च रक्तचापको सम्भावना धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १, २०७५, २०:५६:००